Costa Azahar - Bulshada Valencian - Spain
Ku soo dhowow Costa Azahar
La Costa Azahar Waa dhul ballaadhan oo ka tirsan xeebta Isbaanishka ee Badda Dhexe, oo ku taal Gobolka Castellón, oo ay sameeyeen ilaa 120 km oo xeebo iyo xerooyin.
Magaceedu wuxuu ka yimaadaa ubax liinta, ubax liinta iyo miraha miraha gobolka.
Magaalooyinka ku yaal Costa del Azahar (waqooyiga ilaa koonfurta) waa: Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Torreblanca, Cabanes Coast, Oropesa del Mar, Benicasim, Castellón de la Plana, Almazora, Burriana, Nules, Moncófar , Chilches, La Llosa iyo Almenara.
Caasimadeedu heer sare waa magaalooyinka Benicasim iyo Peñíscola, maaddaama degmooyinkan ay yihiin diiradda weyn ee dalxiiska bulshada.
Waxaa sidoo kale jira dalxiis ballaaran oo loo dalxiis tago oo ku yaal xeebta Castellón, oo leh dalabyo muusig sida Arenal Sound Festival (Burriana), Benicássim Benicasim International Festival, xafladda Rototom iyo SanSan iyo kuwo kale Bandhig Faneedka Electrosplash ee xeebta Fora-Forat de Vinaroz.
Xeebta waxaa ku jira meelaha loo dalxiis tago ee Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicasim iyo Moncófar, laakiin sidoo kale Sierra de Irta, oo ah buuro cufan oo barbar socda badda.
Waxa kale oo aad ka xusi kartaa meelaha dhaadheer ee Prat Cabanes-Torreblanca Natural Park, the Deserto de las Palmas, iyo sidoo kale dabeecadaha jasiiradaha Columbretes oo 56 km u jira xeebta. Ugu dambeyntiina, ma iloobi karno caasimadda gobolka: Castellón de la Plana iyo magaalada deyrka leh ee Mascarell.
Wadada loo yaqaan 'Costa del Azahar' waxaa dhisay A-7 iyo AP-7 wadooyinka waaweyn ee isku xira dhamaan dowladaha hoose isla markaana ku xira Valencia dhanka koonfurta iyo Tarragona oo waqooyiga ah. N-340 sidoo kale waxay ku socotaa xeebta isku midka ah.
Gudaha gudihiisa waxaa si fudud looga heli karaa A-3 oo ka yimaada Madrid iyo A-23 oo ka yimaada Teruel iyo Zaragoza.
Hawada, xeebta waxaa u adeegta garoonka diyaaradaha ee Castellón.
La Costa Azahar Waa dhul ballaadhan oo ka tirsan xeebta Isbaanishka ee Badda Dhexe, kuna taal Gobolka Castellón, oo ay dhistay qiyaastii 120 km oo xeebo iyo xerooyin.
Waxa soo saaray IbizaAbuur